IMotorola Atrix 4G, eyona nto iphambili kuyo, i-1Gb ye-Ram kunye ne-4-intshi ye-QHD yesikrini. Akukho nto inokuthethwa | I-Androidsis
Umqhubi waseMntla Melika i-AT & T ibhengeza yonke imini iimodeli ezintsha ze-smartphone eziza kuthengiswa kule pate yokuqala yonyaka. Abo bethu abangahlali kweli lizwe bababona benomona kodwa sinethemba lokungcamla kwezi marike ngokunjalo, inkohliso yinto yokugqibela elahlekileyo.
Ukuba kutshanje ibiyi Isamsung yazisa nge4G Lowo ubhengeziwe, ngoku ukuya kwenye into enzima kule Android kunye ne-smartphone, i-Motorola. I-Motorola Atrix 4G (sibuyela kwithegi 4G) yi-Android entsha entsha kunye neyokuqala kwifemu yaseMelika ebandakanya I-1 Ghz iprosesa ye-dual-core ehamba kunye nenye into kwaye akukho nto iphantsi kwe-1 Gb yememori yohlobo lwe-RAM.
Le fowuni ephezulu iza nefayile ye- Isikrini se-4-intshi ye-QHD ngobukhulu nangona kubalulekile ukuba sisazi isisombululo esifanayo esicinga ukuba masibe sihle.
Kule seti kufuneka songeze ikhamera engasemva eyi-5 Mpx enefleshi ye-LED kunye nenye ikhamera ye-vga ngaphambili, inkomfa yevidiyo iya kuba nefashoni kunangaphambili. bucala ngasekhohlo I-Motorola Atrix 4G Idibanisa i-16 GB yememori yangaphakathi enokwandiswa kusetyenziswa i-Micro SD.
Akunakwenzeka ukuba ucinge nge-smartphone ephezulu ngaphandle kokudityaniswa okupheleleyo kwaye le Motorola ayinakusilela koku, iWifi 802.11 b / g / n, iBluetooth 2.1 + EDR kunye neGPS zikhona ukongeza kukuhambelana kwayo neWCDMA 850/1900 / iinethiwekhi 2100, GSM 850/900/1800 / 1900MHz, HSDPA kwi-14.4 Mbps.
Ukuba konke oku kubonakala kuninzi, le fowuni intsha ye-Android inenye yeebhetri ezinesakhono esiphezulu kwabo baziwayo, ngo-1930 mAh onako ukusinika iiyure eziyi-9 zencoko kunye neentsuku eziyi-10,4 ekubekweni. Le yenye into.
Icala elisezantsi kukuba liqala nge Inguqulelo ye-Android eyaziwa ngabo bonke njengeFroyo kwaye kule nguqulo imbonakalo ye-Motorola ebizwa ngokuba yiMotoblur. Oko sinokukunika ukuba sibenesi siginali sinye kunye ne-Android 3.0 bareback.
Iya kufika kwimarike yase-US kwi-Q1 yalo nyaka, ukubona ukuba sinokufumana nini enye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » IMotorola Atrix 4G, eyona nto iphambili kuyo, i-1Gb ye-Ram kunye ne-4-intshi ye-QHD yesikrini. Akusekho nto inokuthethwa
Izimvo ezi-20, shiya ezakho
Umhluzi loo cucumber !!!
Ngokuka-Wikipedia, isikrini se-QHD sinesisombululo se-960 × 540.
Kokunye, ikhukhamba enkulu ehambayo esinethemba lokuba izakusasazeka kuwo onke amazwe kuba iya kuba ngumgqatswa onobuzaza ukuba ibe siselula yam elandelayo.
Sele ndinamava amabi e-motorola kunye nohlaziyo lwayo, ndithengise into ebalulekileyo kum ukufumana umnyele kwaye ndathembisa ukungayiphindi ndiyithenge imotorola, iifowuni ezinje ziya kuqala ukuphuma kwiimveliso ezinobuzaza kwaye ndizibophelele kubathengi bazo.
Njengoko uSuky esitsho, isikrini se-QHD sithetha ukuba inesisombululo i-1/4 ye-FullHD, oko kukuthi, 1920/2 x 1080/2 = 960 x 540.
Inyani yile yokuba igama ukuba isisombululo linokubangela ukudideka, kuba i-QHD ikwabizwa ngokuba yi-640 x 360 (sihamba nge-1/4 ye-HD (1280 x 720)) kunye ne-Quadruple High Definition (3840 x Iipikseli ezingama-2160) le yokugqibela okwangoku ayizukuba ngu….
Kutheni inguqulelo ye-Android 3.0?
I-Android 3.0 iya kuba yeyamacwecwe ngokukodwa ... Kwaye i-2.3, 2.4 .. kunye nezo zilandelelanayo, ziya kuba zihamba nazo…
Umntu unokuchaza ukuba yeyiphi ingxaki abaphathi be-Motorola, ukufumana ifowuni enjalo NGAPHANDLE kwe-HDMI OUT ????????????
AKUMKELEKANGA, NDIKHETHA AMAXESHA ayi-1000 I-LG SMART!
Ukuba ujonga kufutshane kwicala lasekhohlo lefowuni ndicinga ukuba yimveliso ye-HDMI, yile nto uyithethayo, akunakwenzeka ukuba ifowuni enjalo iya kuphuma ngaphandle koko.
kodwa masilinde !!
JAG, ukuba ujonga ngokusondeleyo loo mveliso kunokuba yi-microUSB, umgangatho omtsha we-USB, ayikhangeleki njenge-mini-HDMI… Ndidanile de ndizazi ii-specs ezisemthethweni!
Mhlobo ndicinga ukuba ufuna ukuxoxa ngokungenakuphikwa, eso sisibuko se-HDMI ecaleni kwe-USB encinci, kodwa yiya kwiphepha leMOTOROLA okanye iphepha le-AT & T apho banevidiyo nokuba isebenza!
4G ?? Kodwa yintoni le fowuni ye-4G?
ukuba i-HSDPA nge-14,4MB ikude lee kunoko kunokuqwalaselwa njenge-4G
kwaye kude kakhulu nesantya esifezekiswe nge-HSPA +, LTE okanye iWiMax
Ke kuya kufuneka uthethe okufanayo malunga ne-myTouch 4G okanye i-G2?
Ezi zinonxibelelwano olufanayo lwe-HSPA +, ekucingelwa ukuba yi-4G esetyenziswa yi-T-Mobile.
Ewe jonga ... ndikunye neNexus enye, kwaye kudala ndifuna ukuyitshintsha ndinento enamandla ngakumbi ... xa ndifunda le post, amehlo am avuleke kakhulu kwaye bendikuyo inqaku elithi "le ndiyakuyithenga ngaphandle kwamathandabuzo" ... ndide ndifunde "froyo" kunye ne "motoblur" ... ndiyathetha. 2 isiqwenga sekaka…. 1 kuba kwenzeka ukuba ndithenge enye ifowuni ethatha iminyaka emi-4 ukuyivuselela, kunye ne-2 kuba i-motoblur ibonakala kum njengenkunkuma yokwenene egcwele izinto ezingenamsebenzi kwaye icothisa ifowuni. … Uxolo, kodwa ndicinga ukuba iinkampani aziqondi ukuba uninzi lwazo zizinto ezimbini esingazithandiyo …… ndizakulinda. Ubuncinci i-nexus enye ihlala inezihlaziyo zamva nje.
Ukuba une-processor-core processor, ndibheja ukuba iyakucima ibhetri ngokukhawuleza okukhulu.
Ndivumelana nekhulu leepesenti kunye nawe, i-Samsung Galaxy S yam, iyaphelelwa kwiiyure ezili-12 ndiyisebenzisela into ebiyithengile, nangona kunjalo, andiyitshintshi nantoni na.
Ngaba ukhe wayibona indawo yemultimedia, ngakumbi i-laptop dock? OMG!
Ewe, ngumama lowo ...
Ndifuna ukuba ikhutshwe kungekudala eLatin America!
Molo, uxolo, kodwa andazi ukuba ungandikhupha ngaphandle kwamathandabuzo kwaye kungenxa yokuba ayinakurekhoda kwi-1080p? ngubani ongafanelekanga ukuba abe nangaphezulu koko kufuneka akwenze? Ndiyathemba ukuba ungandikhupha ngaphandle kwamathandabuzo, enkosi
Owu, usikelelwe uCyanogen, uyenzile kwiMilestone yam ukuba yintoni Motorola engakuvumeliyo ukuba ube yiyo. Ijongeka ngathi yindawo eyoyikisayo, kodwa kuya kufuneka sithandaze kwi-Saint Cyanogen ukuze sisebenzise le ducucucus ye-droid.
UGustavo Nuñez sitsho
Molo, Umbuzo: ngo-2014 opheleleyo ngaba iseyifowuni yokuthenga okanye zikhona ezinye iindlela ezingcono? ENKOSI
Phendula kuGustavo Nuñez